Wararka - SIDEE COVID-19 UU U SAAMEEYAY DHAQAALAHA CAALAMKA
SIDEE COV-19 U SAAMEEYAY DHAQAALAHA CAALAMKA
Adduunku wuxuu wajahayaa wax uusan arag dhawr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waana tan waxa si sax ah ugu horseedaya dhibaatada dhaqaale ee adduunka. Adduunku wuu isbeddelay wax walbana way ku dheggan yihiin ama haddii loo arko inay dhaqaaqayso markaa xawaare aad u gaabis ah. Haa, intaas oo dhanna waxay udhaceen sababta ka dambeysa in masiibo caalami ah ay socoto waana COVID 19.
Kiiskii ugu horreeyay ee cudurkan aadka u liita, naxdin leh, iyo dilaaga ah Corona Virus waxaa laga helay 30th Janaayo 2020, gudaha Hindiya. Tan iyo markaas kiisaska COVID waxay ku degdegeen heer u noqday wax tartiib tartiib tartiib tartiib ah adduunka oo dhan, xitaa ka dib markii adduunka oo dhami uu hoos u dhacay quful isku dhan. Qufulka ayaa awood u siiyay nolol taagan, halkaasoo wax walba ay istaagaan qof walbana uu kaliya ka walaacsanaa wax kale laakiin noloshooda. Faafidaasina waxay u horseedday qof walba inuu fahmo muhiimadda ay leedahay nolosha qaaliga ah ee Eebbe ina siiyay, wax kasta oo kale.
Aafada adduunku marayo 6dii bilood ee la soo dhaafay waxay saameyn ku yeelatay adduunka dhinac kasta oo suurtagal ah waxayna saameyn ku yeelatay waax kasta oo dhaqaale si xun. Sanadihii la soo dhaafay xasilloonida ay waax kasta oo dhaqaale ka heshay waxay noqotay mid aan micno lahayn lixdii bilood ee la soo dhaafay oo ay ugu wacan tahay xirnaanshaha adduunka. U yeerida xiritaanka loo dhan yahay adduunka oo idil adduunku wuxuu wajahay xaaladaha ka jira qayb kasta oo si aadaab leh uga soo horjeedda. Haddii mar uun nala weydiisto inaan qiyaasno adduun taagan oo aan hadda ku nool nahay, waxay ahayd wax aan macquul ahayn lix bilood dib. Haddana aan ku noolaano noloshii caadiga ahayd ee aan ku noolaan jirnay dhawr bilood ka hor aad ayey u adag tahay in la sawiro.
Saamaynta caalamiga ah ee la xidhay waxay horseedday hoos u dhaca suuqa saamiyada oo aad u xun marka loo eego dhawr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay. Dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha badankood la hakiyey awgood, umaddo badan ayaa wajahay qufulka dheeraadka ah. Xaaladda hadda jirta ee adduunka iyo dhaqaalaha Mareykanku waa mid laga naxo oo bilaabi doonta fahamka dhaqancelinta sannadka 2021 iyo meel aan taas ka horreyn.
Dhammaantood waxay bilaabeen horaantii sanadkaan bishii Febraayo markii suuqa saamiyada, ay ahayd inuu wajaho hoos u dhaca naxdinta leh tan iyo 1931, oo dhulka ku dhuftay 24th Maarso oo dib udhacay dhawaanahan. Waxsoosaarka guud ayaa hoos ugu dhacay 4.8%, taas oo ahayd mid si lama filaan ah u dhacday tan iyo markii dhaqaalaha liitay.
Mareykanka, waddanka lagu sheego inuu yahay waddanka ugu xasiloon dhaqaale ahaan wuxuu wajahayaa hoos u dhac dhaqaale oo ba'an kaas oo cadeynaya inay masiibo weyn ku tahay qaranka. Hoos u dhaca dhaqaale ee soo kordhay ee imanaya, heerka shaqo la'aanta ayaa kor ugu kacaysa si baaxad leh, iyada oo ganacsiyado badan la xidhayo oo ay daciifinayaan shaqaaluhu ugu dambayntii. Xaaladaha si dhakhso leh uma sii socon doonaan, dad badan oo dalka ku noolna waxay la kulmi doonaan masiibo dhaqaale oo aad u weyn qiyaastii sannad soo socda. Dadku waxay noqonayaan shaqo la'aan oo waxay noqoneysaa mid aad u dhib badan si loo maareeyo noloshooda waxayna ugu dambeyntii la kulmaan dhibaato dhaqaale oo aad u weyn.
Niyad jabka ku yimid canshuuraha saliida ceyriin ee heerkoodii ugu hooseeyay abid soo maray iyo warshadaha saliida ayaa durba la kulmaya waajibaadka waa weyn, hadii ay la kulmaan caqli xumo si ay dib ugu soo celiyaan khasaarahooda mudada, natiijooyinka waxay cadeynayaan inay yihiin wax ba'an bangiyada. Maadaama bangiyada ay la kulmi doonaan khasaaro badan. Xitaa qaybta caymiska ayaa durba bilaabay inay wajahaan jaantusyo hoos u dhacaya.
Qeybta ugu saameynta badan oo aan dib u cusbooneysiin doonin bilaha soo socda ama laga yaabee sanad inay tahay Warshadaha Safarka iyo Dalxiiska. Si kasta oo ay u xaddidaadda xaddidan kor u qaaddo haddana dadku waxay ka horjoogsanayaan naftooda safarka iyo socdaalka maxaa yeelay taasi waa sababta ugu weyn ee faafidda cudurkan dilaaga ah. Sidaa darteed, ha noqoto dalxiis gudaha ah ama dalxiis caalami ah labada waaxoodba waxay wajahayaan dhibaatada in ka badan qeybaha kale. In kasta oo laga yaabo inaan kala garano hoos u dhaca gudaha marka loo eego dalxiiska caalamiga ah maxaa yeelay socdaalka gudaha waxaa laga yaabaa inuu ku socdo xawaare gaabis ah oo laga yaabo inuu ka caawiyo kor u qaadideeda si ka duwan tan kale. Huteelada, maqaayadaha, goobaha dalxiisyada, casinos, baararka, iyo warshadaha tafaariiqda ayaa sii wajihi doona hoos u dhac ku yimaada iyaga bilaha soo socda.